Juventus oo €50m ku baadi goobaysa Federico Bernardeschi – Gool FM
(Torino) 31 Maajo 2017 – Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Juventus ay dalab qaali ah oo ku kacaya €50m u dirayso garab-weerarka Fiorentina ee Federico Bernardeschi kaddib Champions League final.
Sida ku dhigan Tuttosport, kooxda Bianconeri ayaan diyaar u ahayn inay ka harto laacibkan, tiiyoo ay jirto cadaawadda ka dhexeeysa iyaga iyo kooxda Tuscania.
Warsidaha La Nazione ayaa sheegaya inay Juve adeegsan doonto qabtaha Juve ee Gianluigi Buffon si uu laacibkan uga dhaadhiciyo inuu iyaga kusoo biiro maaddaama ay labada laacib kasoo wada jeedaan tuulada Carrara ee gobolka Tuscania iyagoo xiriir wanaagsan leh.
Yeelkeede, Juve uun maaha kooxaha ku raad jooga 23-jirkan oo waxaa sidoo kale ku haysta Chelsea iyo PSG, iyadoo uu laacibku ka caga jiidayo dalab qandaraas kordhin ah oo ay u bandhigayso Viola kaasoo uu fasalkii ku qaadanayo €2.5m.
''Seddexleey? Taas waxaa iska leh CR7'' - Radja Nainggolan oo u dayriyay taageerayaasha Juve